Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Archives for Muqdisho
Xaaladda daganaansho oo laga dareemayo magaalada Muqdisho
May 28, 2011 - By: mibrahim
Xaaladda daganaansho ayaa saaka laga dareemayaa magaalada Muqdisho oo saacadihii la soo dhaafay ay ka socdeen dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Dowladda Faderaalka ee Somaliya oo ay taageerayaan »
Dab gaystay khasaaro oo ka kacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
May 3, 2011 - By: mibrahim
Dab xoogan oo gaystay khasaaro ayaa barqanimadii maanta ka kacay baqaaro ku yaala suuuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ka dib markii madaafiic habow ay ku dhaceen baqaaro lagu iibiyo »
Ciidamo ka tirsan Dawladda Federaalka oo Laayey Dad Banaanbax dhigaayay
February 15, 2011 - By: Abdirahman. A
Ciidamo ka tirsan Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku laayey dad rayid ah oo ka qaybgalaayay banaanbax usoo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir ee Dawladda »
Banaanbax Looga Soo Horjeedo Dawladda Federaalka iyo Al-Shabaab oo ka dhacay Muqdisho
February 13, 2011 - By: Abdirahman. A
Banaanbax balaaran oo looga soo horjeeday Dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo kooxda kasoo horjeeda ee Al-Shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ku »
Dhalinyarada Ku Dhaqan Muqdisho oo Sheegay in ay samayn doonaan Banaanbaxyo lamid ah kuwii Masar iyo Tunisia
February 12, 2011 - By: Abdirahman. A
Dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhowaan ay samayn doonaan banaanbaxyo balaaran lamid ah kuwii ka dhacay dalalka Tunisia iyo Masar oo sababay in xilka ay isaga degaan »
Rag Meyd Ah oo Lasoo Dhigay Jidka Warshadaha ee Muqdisho
January 16, 2011 - By: Abdirahman. A
Labo qof oo meyd ah ayaa saaka lasoo dhigay jidka Warshadaha ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay kusoo arkeen qaar kamid ah dadweynaha reer Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho »
Dowladda Federaalka oo Xukun ku Riday 14-qof oo u dhashey dalka Hindiya
January 15, 2011 - By: Abdirahman. A
Maxkamada gobolka Banaadir ee Dowladda Federaalka ayaa maanta la horkeenay muwaadinin u dhashey wadanka Hindiya oo dhowaan magaalada Muqdisho ku xireen Ciidamo ka tirsan Dawladda. Muwaadininta la »
Dagaalo Ka Dhacay Waqooyiga Magaalada Muqdisho
November 30, 2010 - By: Abdirahman. A
Saacadihi lasoo dhaafay waxaa ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho dagaalo xoogan oo u dhaxeeya dhinacyada iskasoo horjeeda. Wararka aanu helayno ayaa sheegaaya in dagaal u dhaxeeya »
Dad ka badan 10-qof oo Ku Dhintey Duqeymo Ka Dhacay Muqdisho
November 21, 2010 - By: Abdirahman. A
Duqeymo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimashada inka badan 10-qof oo rayid ah oo ay madaafiicdu ugu tageen guryaha ay deganyihin. Wararka ayaa sheegaaya in »
Dekadda Muqdisho Oo Laga Hirgeliyey Taawar Lagula soconaayo Dhaq dhaqaaqa Maraakiibta
November 1, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa maanta dekadda magaalada Muqdisho laga hirgeliyey taawar cusub oo lagula soconaayo dhaq dhaqaaqa Maraakiibta goosheeya xeebaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa kusoo jeeda dekadda »
10-qof oo Ku Dhintey Madfac Ku Dhacay Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
September 29, 2010 - By: Abdirahman. A
Ugu yaraan 10-qof ayaa ku dhimatay Suuqa weyn ee bakaaraha magaaladda Muqdisho kadib markii madfac uu ku habsaday qayb kamid ah suuqaas oo uu ka soconaayay ganacsi. Wararka ayaa sheegaaya in madfac »
Tagged With: Dagaalkii Isniinta, Muqdisho
Xaaladda Muqdisho oo deggan
September 24, 2010 - By: Abdirahman. A
Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa saaka degan kadib dagaalo iyo duqeymo xoogan oo u dhaxeeyey Ciidamada Dawladda Federaalka iyo kuwa AMISOM iyo xoogaga mucaaradka gaar ahaan Al-Shabaab iyo Xisbul »
Dad Rayid ah Oo Ku Dhintey Duqeymo Ka Dhacay Muqdisho
August 10, 2010 - By: Abdirahman. A
Wararka ka imaanaya magaaladda Muqdisho ayaa sheegaaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo xoogan oo xalay ka dhacay duleedka magaaladaasi. Tiro madaafiic ah ayaa waxaa ay ku dhaceen halka lagu »
Madfac Dad Isku qoys ah Ku Laayay Muqdisho
July 25, 2010 - By: Abdirahman. A
Madfac habow ah ayaa lagu soo waramaaya inuu ku dhacay guri ku yaalla degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir isla markaana halkaas ku laayay dad isku qoys ah. Hooyo iyo labo caruur ay dhashey ayaa »
Dagaaladii Ka Dhacay Muqdisho Oo Sababay Khasaaro Dhimasho iyo Dhaawac
June 18, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa saaka xaafada Xoosh ee degmada Dhaarkenley ee magaalada Muqdisho ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeyey Ciidamada Dowladda Federaalka iyo Ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa la isku adeegsaday »
Muqdisho Oo Saaka degan iyo Khasaaraha dagaaladii oo Kordhay
June 10, 2010 - By: Abdirahman. A
Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa saaka ah mid degan,ka dib markii ay halkaas ka dhaceen dagaalo iyo duqeymo culus oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobaha lagu dagaalamay shalay »
Xaaladda Muqdisho oo Saaka Degan iyo Khasaaraha Ka Dhashey dagaaladii Shalay oo Kordhay
June 4, 2010 - By: Abdirahman. A
Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa ah saaka mid degan ka dib markii shalay ay halkaas ka dhaceen dagaalo iyo duqeymo culus oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobaha ay dagaaladu ka »
Khasaaro Badan oo Ka Dhashey dagaaladii Muqdisho iyo Ciidamada Dowladda Oo La Wareegay Fariisimo Hor leh
June 3, 2010 - By: Abdirahman. A
Dagaalo culus iyo duqeymo ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho,kaas oo u dhaxeeyey Ciidamada Dowladda Federaalka oo gacan ka helaaya kuwa AMISOM iyo Xoogaga Mucaaradka ee kasoo horjeeda. Waxaana »
Shacab ku dhintey Madaafiic Ku Dhacdey Xaafado Ku yaalla Muqdisho
June 1, 2010 - By: Abdirahman. A
Habeenimadii xalay magaalada Muqdisho ayaa waxaa xaafado ku yaalla ku dhaceen madaafiic geystay khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo ay soo gaartay dadka rayidka ah. Madaafiicdaasi ayaa »
Meydad Rag dhalinyaro ah oo Lasoo dhigay Xaafad ka mid ah xaafadaha Muqdisho
May 26, 2010 - By: Abdirahman. A
Labo Wiil oo dhalinyaro meydadkooda ayaa lasoo dhigay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada Siliga Ameerikaanka ee magaalada Muqdisho. Meydadka dhalinyaradaan ayaa la arkay »
Khasaaraha ka dhashay dagaalo ka dhacay Muqdisho Oo Kordhay (Sawiro)
May 23, 2010 - By: Abdirahman. A
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Muqdisho halkaas oo ay maanta ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo Xoogaga Mucaaradka ee »
Dagaalo Culus oo Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
May 23, 2010 - By: Hanad Askar
Waxaa saaka waaberkii dagaal dib uga cusboonaadey magaalada Muqdisho, dagaalka ayaa daba socdey dagaalo gelinkii danbe ee shalay ka dhacay xaafado kamid ah waqooyiga Muqdisho kuwaas oo ka mid ah »
Khasaaro Ka Dhashay Dagaalo Ka dhacay Muqdisho
May 21, 2010 - By: Abdirahman. A
Dagaalo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda Federaalka iyo Xoogaga Mucaaradka ee kasoo horjeeda ayaa saaka ilaa iyo habeenimadi xalay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Goobaha ay dagaaladu ka dhaceen waxaa »
Khasaaraha Ka Dhashay Duqeymo Shalay Ka Dhacay Muqdisho oo Sii Kordhay
Waxaa sii badanaayay khasaaraha ka dhashay duqeymo culus oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho xilli ay halkaas ku kulmayeen Mudaneyaasha Baarlamaanka Dowladda Federaalka. Goobaha Caafimaadka aan »
Wefdi u hogaaminaayo Safiirka dalka Talyaaniga ee u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta booqasho kedis ah oo aan hore loo si shaacin ku gaaray magaalada Muqdisho. Stifano Dejak,ayaa kasoo duulay »
Khasaaraha ka dhashay Dagaalada iyo Duqeymihi Shalay ka dhacay Muqdisho oo Kordhay
May 13, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa sii kordhaaya khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalo iyo duqeymo culus oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo u dhaxeeyey dhinacyada iskasoo horjeeda. Saraakiisha Caafimaadka ee Isbitaalada »
Xaalada Muqdisho oo Saaka degan ka dib dagaalo iyo duqeymo Culus oo halkaas ka dhaceen
April 3, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa saaka degan xaalada magaalada Muqdisho ka dib marki ay halkaas ka dhaceen dagaalo iyo duqeymo culus oo u dhaxeeyey Ciidamada Dowlada oo taageero ka helaaya kuwa AMISOM iyo Xoogaga Mucaaradka ee »
Dagaalo Culus oo galabta ka dhacay Muqdisho
Gelinka dambe ee maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeyey dhinacyada iskasoo horjeeda kaas oo dhaliyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac badan. Dagaaladaan ayaa bilaabmay »
Tagged With: Dagaalo, Muqdisho
Xaaladda Magaalada Muqdisho oo Saaka degan
Waxaa Jawi deganaansho saaka laga dareemaaya Magaalada Muqdisho ka dib marki ay halkaas ka dhaceen dagaalo iyo duqeymo u dhaxeeya dhinacyada iskasoo horjeeda oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho »